Inkantini ngomculo bukhoma vela yonke indawo e-Europe, ukunikela indlela yokubulala isikhathi endaweni emnandi lapho iziphuzo nezingoma flow khulula. Uma ufuna ukuzijabulisa edolobheni ngesikhathi sakho uhambo ngesitimela, sinezinto ezinye iziphakamiso. Nazi top yethu 5 amabha umculo bukhoma lonke elaseYurophu:
Umlando Isitolo ingenye Amabha engcono ngomculo bukhoma e France. Kuyinto ngaphandle nje Bastille metro station. Akukhona nje kuphela ukuthi kube lula ukufinyelela kuzo, kodwa futhi ethokomele kakhulu. Ibha uku phambi, futhi inesiteji sekhonsathi langempela ngemuva kwe- indawo yomculo, ngesikhala sezithameli sifihliwe ngemuva kwaso.
#ukuphuza ibhere #umabhebhana #ubukhoma #ibha yomculo europetravel nightlife travelamsterdam travelfrance travelparis